Semalt: Ahoana no Hakana ny Sampan-tsary rehetra Ho An'ny Fahafahana?
Ny dokambarotry bronerie dia tsy fisafotofoto fotsiny fa mampisy risika fiarovana. Misy ny fiantraikany ara-moraly amin'ny fanakanana ireo dokam-barotra ireo. Amin'ny fanatanterahana ny fanakanana adiresy ao amin'ny tranokalanao, ianao dia manapaka ny karaman'ireo kodia, mamolavola, ary manome ny votoatin'ny fijerinao matetika. Ny dokam-barotra izay tianao hotakiana dia ireo ihany no manome ny famatsiam-bola amin'ny fametrahana ny zavatra hafa rehetra amin'ny aterineto. Na izany aza, ny fahamaroan'ireo dokam-barotra ireo dia manohintohina ny traikefa an-tserasera.
Michael Brown, mpandraharaha ara-barotra avy amin'ny Semalt , dia manome torohevitra vitsivitsy eto:
Ireo mpandika lalàna dia tena ara-dalàna ka midika izany fa tsy manan-danja izy ireo. Ny fanapahan-kevitra momba ny fanakanana ny dokambarotra dia miorina tanteraka aminao. Raha manapa-kevitra ny hampiasa Ad Blocker ianao, dia ataovy izay hahamety azy fa hanadio anao izy. Na izany aza, manana fetrany ihany izy ireo
Ny famatsiana vola ho an'ny Block Blocker dia avy amin'ny fikambanana na olona iray. Noho izany, tokony hitarika ny fikarohana momba ny orinasa ny olona iray alohan'ny fampiasana ny serivisy. Tsy maintsy ataonao azo antoka fa hanakana ny dokam-barotra rehetra izy ireo raha mbola miaraka aminy ianao. Misy ireo toe-javatra izay miova ny fananana ny adiresy Ad Blocking ary ny tompon'ny vaovao dia mahazo alalana avy amin'ny orinasa sasany mba hialana amin'ny adiresy adiresy.
Ny fametrahana fanitarana amin'ny tranokala iray dia mety hampiadana ny navigateur. Na izany aza, raha manana milina mahomby ianao dia tsy tokony hanahy anao izany. Raha tsy izany dia mety tsy maintsy mametra ny tenanao amin'ny tabilao roa na telo ianao amin'ny fotoana iray ihany.
Ny fikolokoloana dia mitaky fanavaozana tsy tapaka izay mitaky fotoana bebe kokoa sy loharano..
Tsy afaka miasa tsara raha tsy misy famandrihana. Tsy maintsy misafidy lisitr'ireo tranonkala tianao hotratrarina ianao ary ampidirinao ao amin'ny lisitry ny fanakanana azy ireo.
Tsy azo atao ny manangana Ad Blocker iray manontolo raha toa ka mihazakazaka mpizarazara maro ianao.
Soa ihany fa misy vahaolana tsara kokoa izay tsy misy famandrihana tsy misy famandrihana. Manakana ny dokam-barotra ho an'ny rafitra iray manontolo izany. Tsy mila rindrambaiko hametrahana azy io, midika izany fa tsy hampihena ny rafitrao.
Mametraka ny antontan-drakitra avy amin'ny MVPS. Manatsara ny adiresy adiresy adiresy fantatry ny mpizara miaraka amin'ny toetra tsy misy dikany. Rehefa miezaka miditra amin'ny aterineto ny solosaina, dia hamerina ity karazana tsy misy dikany ity izay midika fa tsy mamoaka ilay adiresy izy io, izay hamerenany fotoana betsaka sy loharanom-bola ho setrin'izany. Ity manaraka ity dia dingana iray amin'ny fomba hanakanana ireo dokambarotra amin'ny fampiasana ny fomba ampiasain'ny MVPS.
Manamafy fa manana tombontsoa amin'ny fitantanana ianao. Sokafy ny "Run" Console amin'ny alàlan'ny fanindriana ny fanalahidy varavarankely ary R miaraka.
Midira "Services.Msc" ary tadiavo ny safidy "DNS Client". Tsindrio mahitsy izany ary tsindrio mankany amin'ny "Properties" ary misafidiana ny "Stop."
Mianara ny "Fitaovana" na "Disabled." Manam-paniriana ny safidy Manual
Ampiharo ireo fanovana vaovao ary avereno indray.
Manolo ireo rakitra tompona ao amin'ny "C: \_ Windows \_ System32 \_ drivers \_ etc" miaraka amin'ireo sary vaovao.
Raha manandrana manohitra ny hetsika ny anti-virus na ny fiarovana windows, dia mihena.
Fantatrao izao ny fomba hanakanana ny doka tsy misy fanakanana dokambarotra isaky ny mipetraka ao amin'ny Internet. Ataovy azo antoka ny fanavaozana ny tahirim-pandrafetana matetika ary manolo azy ireo ao amin'ny lahatahiry voatondro Source .